May 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 200 oo askari iyo taliyeyaashooda ayaa ka goostay ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo madax-banaan ay u xaqiijiyeen bog wareedka Puntland Mirror. Ciidamadan goostay ayaa maamulka Somaliland u qaabilsanaa deegaano […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Jarmalka ayaa dhimay taageero maaliyadeed oo ay ku bixin lahaayeen isbitaalka guud ee Garoowe, sida uu sheegay wasiir. Isaga oo ka hadlayay Garoowe Sabtidii, wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in […]
Garowe-(Puntland Mirror) Germany has reduced financial support to Garowe general hospital, minister said. Speaking in Garowe on Saturday, Puntland minister of health Jama Farah Hassan said that Germany has reduced the financial support to upgrade […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Axmed Muuse Nuur u magacaabay guddoomiyaha gobolka Mudug, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. Guddoomiyaha cusub ayaa horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Sciid Cabdullaahi Deni ayaa isbadal ku sameeyay garsoorka gobolka Mudug. Digreeto ka soo baxday madaxtooyada caawa fiidkii, ayaa xilka looga qaaday garsoorayaasha maxkamadda derejada 1-aad ee gobolka Mudug, tan racfaanka […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa duqeyn uu ka geystay gudaha Puntland ku dilay saddex dagaalyahan oo katirsanaa Al-Shabaab, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen bayaan maanta oo Sabti ah. Duqeynta ayaa ka dhacday […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Agaasimaha cusub ee isbitaalka Garoowe Dr Xabiibo Nuux Ismaaciil ayaa maanta oo Sabti ah xafiiska la wareegtay. Munaasabada xil-wareejinta oo lagu qabtay isbitaalka Garoowe ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiirka caafimaadka dowladda Puntland Jaamac […]
Nairobi-(Puntland Mirror) Kenya ayaa sheegtay in ay xirtay xadka ay la leedahay Soomaaliya, sida uu tabiyay wargeyska Daily Nation maanta oo Talaado ah. Masuuliyiinta Kenya ayaa sheegay in go’aanka la gaaray si loo adkeeyo ammaanka. [...]